Umzi mveliso weBracket -iTshayina abaThengisi baseBracket, abaXhasi
Isibiyeli sensimbi esingenasici: JW-01
Inkcazo yemveliso: Ukwenza isidlo sakusasa esimibalabala, isidlo sasemini esilungiswe kakuhle okanye isidlo sasemini esinothando wedwa, uhleli ujikeleze nosapho kunye nabahlobo bakho uncokola nabo, ubomi bupolishiwe ngezi ziqendu, ezenza ukuba abantu bonwabele. Kwindawo efudumeleyo yasekhitshini, isixhobo esisebenzayo nesinobuthi kufuneka sibe yinto engabalulekanga. Kwakha imeko-bume yasekhitshini eethe-ethe, emnandi kakhulu. Ukuba nesinki ekumgangatho ophezulu yinto evakalayo yentliziyo yethu, isimo esinezinto ezintle kunye nenqabileyo ...
Ibhrakethi yentsimbi engenazintsimbi: JW-02
Inkcazo yemveliso: Ukwenza isidlo sakusasa esimibalabala, isidlo sasemini esilungiswe kakuhle okanye isidlo sasemini esinothando wedwa, uhleli ujikeleze nosapho kunye nabahlobo bakho uncokola nabo, ubomi bupolishiwe ngezi ziqendu, ezenza ukuba abantu bonwabele. Kwindawo efudumeleyo yasekhitshini, isixhobo esisebenzayo nesinobuthi kufuneka sibe yinto engabalulekanga. Idala umoya ococekileyo wekhitshi, okonwabisayo ngokwenene.
Ibhrakethi yentsimbi engenazintsimbi: JW-03
Isibiyeli sensimbi esingenasici: JW-04
Isinki yekhitshi yinxalenye ebalulekileyo yekhaya lakho kubomi bemihla ngemihla. Isinki ekhululekileyo yenziwa ngentsimbi engenasici (i-SS201 okanye i-SS304) yokuqina kwe-kutu. ● Ukufakwa kwesandi kophazamiso oluncinci ● Uyilo olukhulu lwebhotile ngokulula kwakho: Ukuhlolwa komgangatho ongqongqo ngaphambi kokuhanjiswa kunye neendlela ezininzi zokupakisha ozithandayo. Ukusetyenziswa kwemveliso ● Ukuhlamba ikhitshi kunye nezitya. ● Ukuhlamba nokulungisa ukutya. Iingcebiso ngemveliso ● Musa ukulahla nayiphi na ikhemikhali. ● Musa uku ...
I-bracket yensimbi engenasici: iJW-05
Isibiyeli sensimbi esingenasici: JW-06
Isibiyeli sensimbi esingenasici: JW-07
Isibiyeli sensimbi esingenasici: JW-08